Somalia online: 01/08/16 - 01/09/16
Daawo Sawirada Horjooge Sare oo Al-Shabaab ah oo dowladda isku soo dhiibay
MUQDISHO (SONNA) Horjooge Sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA,
Horjoogahaan oo lagu magacaabo Ibraahim Adan Ibraaim ayaa goor dhow waxaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho.
“Laga bilaabo Caawa Waxaan cadaynayaa inaan isaga baxay Maleeshiyada Al-Shabaab, go’aankaan waxaa qaatay labo sano ka hor, waxaana igu dhaliyay markaan arkay sida looga been sheegayo diinta islaamka iyo dhaqan galinta shareecada islaamka, waliba aniga oo ka faa’iidaysanaya balanqaadkii madaxweynaha ee ku aadanaa in qofkii ka soo laabta Al-Shabaab la cafinayo.” Sidaasi waxaa yiri Ibraahim Adan
Ninkaan ayaa ka mid ahaa Horjoogayaasha sar sare ee kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab wuxuuna ku magacownaa Madaxa waxbarashada ee gobalada Baay iyo Bakool.
Sawir-Qaade:Farxaan Saleebaan Daahir
Qasaare ka dhashay Dhisme Dabaq ah oo Caawa ku dumay Degmadda Shangaani
Muqdisho(SONNA):–Degmada Shangaani ee Gobalka Banadir ayaa waxaa Caawa ku dumay Dhisme laba Dabaq ah oo ay daganaayeen Dad shacab ah ,waxaana halkaas ka dhashay dhimashada labo qof oo uu ku jiro Ilmo yar .
Ciidamadda Booliska iyo Kooxaha Gormadka Deg Dega ee Gobalka Banadir oo halkaas gaaray ayaa dhismaha Hoostiisa ka soo saaray meedadka Ilmo yar iyo Hooyadiisa ,waxeyna sidoo kale ku guuleesteen in halaas ay ka soo saaraan Afar qof oo bad qaba .
Agaasimaha Waaxda Gurmadka Deg Dega ee Gobalka Banaadir Mudane C/laahi Maxamed Sanay ayaa SONNA u sheegay in meeshaas caawa ay ka dhacday dhibaato xun ayna ka soo saareen dhismaha dumay hoostiisa Meedka Hooyo Magaceeda lagu sheegay Xabiibo iyo Cunug yar ay Dhashay,islamarkaana ay Dad kale oo bad qaba ay halkaasi ka soo saareen .
“Cawa meeshan waxaa ka dhacday mashaqo Xun waxaana soo dumay Dhisme laba dabaq ah waxaana ka dhashay dhimashada Ilmo Yar iyo Hooyadii oo jiifay guriga, waxaana sidoo kale ka soo saarnay dhismaha Afar bad qabta, “
Agaasimaha Waaxda Gurmadka deg dega ayaa sidoo kale sheegay Dhismaha Dumay Caawa in uu ahaa Gurigii Madbacadda Qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan qeybtii la dhigi jirey Matoorada oo ku taala Degmada shangaani ee Gobalka Banaadir.